Kusarudzwa kweMagamba Kokonzera Mutauro Mukuru
Vatungamiri nevatsigiri vemapato maviri eMDC, vakabatana Chitatu mukuvigwa kwasachigaro weMDC inotungamirwa naVaArthur Mutambara mudunhu reMidlands South, VaLyson Mlambo, avo vakashaya mutsaona yemotokari nemusi weMugovera.
VaMlambo vakashaya pamwe chete nemunyori wezvekurima mubato iri, VaRenson Gasela, pamwe nasachigaro wezvevanhukadzi mubato iri muMidlands South, Amai Ntombizodwa Gumbo.
Kufa kwevanhu ava kwamutsiridza nyaya yekuti gamba munhu akaita seyi, zvichetevera kudomwa kwakaitwa Muzvare Alice Nkomo veZanu PF kuva gamba redunhuguru. Muzvare Nkomo vakashayawo mutsaona yemotokari mukupera kwesvondo.
Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti havasi kufara nenyaya yemasarudzirwo emagamba enyika.Vakawanda vanoti Politiburo yeZanu-PF haifanirwe kuve iyo inosarudza magamba, nekuti maiitiro ayo, ndeekuda kuremekedza vanhu vebato iri chete.
Vakawanda vanoti izvi ndizvo zvakapa kuti vanhu vakaita saVaNdabaningi Sithole, Safirio Madzikatire, nevamwe vatadze kuradzikwa paHeroes Acre semagamba enyika sezvaidiwa nevanhu vakawanda.
Vakawanda vanotiwo vanenge vaitwa magamba vanopihwa mari dzemitero yevanhu, kana kuti ma taxes, nekudaro panofanirwa kuitwa hurongwa hwakajeka pakudomwa kwemagamba.
Hurumende yeZimbabwe yakatanga kuvaka marinda eHeroes Acre muna 1981 ichibatsirwa neNorth Korea.
Marinda aya, sechishuwo chevakawanda, anofanirwa kuradzikwa vana veZimbabwe vanenge vashuramare mumabasa avanoita, angave munyaya dzezvematongerwo enyika, nhabvu, kuimba kana kubatsira vanhu sezvakaitwa namushakabvu VaJairos Jiri, avo vakabatsira zvikuru vanhu vakaremara.
Mamwe magamamba akaita saVaLookout Masuku akatovigwa kuLady Stanley Cemetery nenyaya iyoyi yekuti Politibuto yeZanu-PF inoita hayo madiro ajojina, uye kuti kazhinji, vanhu veZanu-PF chete ndivo vanoitwa magamba enyika.
VaEdgar Tekere vaimbova munyori mukuru muZanu-PF. VaTekere, avo vakamboti havadi kuvigwa paHeroes Acre kana vafa, vanoti hazvibatsire kuti Zanu-PF chete idome magamba.
Mashoko aya anotsinhirwawo nemutauriri wechikwata cheMDC inotungamirwa naVaArthur Mutambara, VaEdwin Mushoriwa, avo vanoti vanhu vakawanda pakafa VaGasela vakati dai vaitwa gamba renyika.
Asi vanoti nekudomwa kwemagamba neZanu-PF chete, zvinhu zvakaoma kuti zviitwe. Professor John Makumbe vanodzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe. VaMakumbe vanoti zvekuti Zanu-PF chete iite izvi, hachisi chinhu chakanaka.
VaMakumbe vanokurudzira kuti vanhu veZimbabwe vagadzire komiti yavo vega isina nechekuita neZanu-PF, vodoma magamba avo vega mumamana mavo.
Asi kunyange hazvo vamwe vachiti magamba ehondo chete ndivo anoradzikwa kuHeroes Acre, pane vamwe vakaita sa VaGary Magadzire, pamwe naVaBorder Gezi, vasina kuenda kuhondo, asi vakaradzikwa pamarinda aya.
Vakawanda vanoti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kunyange vachigunun’una nenyaya yekuti VaGezi vakaiswa nekuti vaive nhengo yeZanu-PF.
Kana imo muZanu-PF macho mune bowa bowa panyaya yekusarudza magamba.
Mamwe madzimai mubato iri anoti haasi kufara nekuti madzimai haanyatsopihwe chiremera. Vanoti kuti mudzimai aite gamba, murume wake anofanirwa kunge aine chigaro chepamusoro muZanu-PF. Vanoti izvi zvinoonekwa pamadzimai ari kuHeroes Acre akaita saAmai Julia Zvobgo, Mama Mafuyane, Amai Sally Mugabe, Amai Ruth Chinamano, uye Amai Sunny Ntombiyelanga Takawira.
Asi madzimai akaita saAmai Sheba Tavarwisa vaive gamba muhondo, havana kupihwa chiremera chegamba.
Chief whip weZanu-PF mudare reparamende, VaJoram Gumbo, vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vasarudzwe neZanu-PF.
VaGumbo vanoti zvakanaka kuti vanhu vataure kana vachida kuti zvigadziriswe.
Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vakaudza dare reparamende gore rapera kuti vatungamiri vatatu vemapato ari muhurumende, vari kukurukura nyaya iyi.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaNelson Chamisa, vanoti havasi kufara nenyaya yekuti Politiburo isarudze magamba. VaChamisa vanoti munyaya yekunyorwa kwebumbiro remitemo panofanira kubuda nyaya yekuti chii chinonzi gamba, uye ndiyani anosarudza.
Vainnocent Gonese , chief whip weMDC, vanoti vakamboedza kupinza nyaya iyi mudare reparamende asi hapana chakabuda.